Kaliya halka dhulka ku jiri kartaa abuurka iyo soo saaraan midhihiisa inta lagu jiro waqtiga. Kaliya marka jidhku maskaxda ku hayaan dharka uu ku duugo kaas oo uu ku noolaan doono mid aan dhimanayn.
Miyaadan soo bixin jidka aan iftiiminayn? 010-030 Ee socda dhexdoodana wixid maalin aan la soconayn.
Wareegyada diiniga ah ee diiniga ah, maskax ahaan, ama dareen maskaxeed, ayaa la rumeeysan yahay oo ay ku fekereen qaar ka mid ah rabitaankooda iyo caadifadahoodu ay ku kaceen oo dhiirigeliyeen, in ninkeeda kasta oo isdaba jooga ahi uu raadsado qofkale oo jinsiga ka soo horjeeda haddii uu ku guulaysto adduunka, ama horumarinta ruuxi ahaaneed. Dheeraad ah, iyo habka arrintan awgeed, waxaa la sheegayaa in nafta uu lahaa asal ahaan midduu ahaa, laakiin wuxuu ku xidhan yahay dembi qadiim ah oo u dhexeeya labka iyo dheddig-taas oo ah murugada iyo dareenka nolosha nolosha aadanaha. Tani, ka dib markii wareysiga adduunka, iyada oo loo marayo dembigeeda dembigeeda, nafta ayaa ugu dambeyntii heli lahayd "saaxiibkaa" ama "badhkii kale", oo ay ka dibna soo gali doonto wakhtiga farxad qumman oo loo yaqaano oo keliya naftiisa nafta. Waxaa jira kala duwanaansho qurux badan oo ka mid ah fikradda labada ruux. Waxay u oggolaan doontaa inay si buuxda u ciyaaraan dareenka suugaanta, waxayna isku deyi doonaan inay noqdaan sheeko xeeldheer; laakiin waa caqiido u horseedi doonta natiijooyin aan farxad lahayn. Haddii aad ku fekereysid waxay maskaxda ku hayn kartaa in ay fiiriso ama ay dheeraato "nafta-qofka," iyo, xaqiiqda sharciga iyo dalabka, mid ayaa soo bixi doona. Hase yeeshee, "saaxiibka" ayaa hore u lahaan lahaa xiriiro gudaha ah oo mamnuucaya caqiidooyinkaas. Mararka qaarkood, laba qof oo isu arkaa inay isku raacsan yihiin fekerka maskaxda labadaba si ay u tixgeliyaan dareenkooda, oo u sheegaan in mid waliba loo sameeyey si kale, iyo sida naftooda ay yihiin mataanaha waa inay iska leeyihiin midba midka kale. Marka heerkani uu aaminsan yahay in la gaaro fadeexaddu waxay hubaal tahay in la raaco. Kadibna "nafta-nafta" waxay ku dhawaaqaan in ay yihiin kuwo aan la fahmin oo la silciyo, oo dhammaanteenna ku wada nool xaalado been ah. Laakiin dad badan, markii ugu horeysay waxay ahaayeen qaar ay ka heleen "jinni-nafta," ayaa sababay in dambe oo ay rabaan. Caqiido badan oo loogu yeedhay xaasaska ruuxiga ah waa magac kale oo fikradan ah.
Cilmi-baaristaan ​​labadaba nafsiyadoodu waa mid ka mid ah waxbarista ugu ba'an ee da 'kasta. Waxay isku dayeysaa in ay nafteeda u jajabiso diyaaradda jinsiga, waxay ku xad gudbi lahayd xiriirka qoyska si ay u dardar galiyaan cuntooyinka xayawaanka ah, oo waxay isku dhex qarinayaan dareen maskaxeed oo qarsoodi ah.
Labada naas-duub waa fikrad qallafsan oo laga soo qaatay taariikhda occato ee waagii hore. Waxaa la sheegay in, markii hore, bani-aadminnimadu maaha sida hadda - loo kala qaybiyay lab iyo dhedigba jirka - laakiin in bani-aadmigaas ay ka mid yihiin labada jinsi midkood, in kuwani ay ahaayeen kuwo awood leh sida kuwa ilaahyada; laakiin ka dib markii muddo aan habooneyn, tartanka nin dumar ah ayaa ragga iyo haweenkeena maalinimada ah, oo sidaas u kala qaybsadeen, waxay lumiyeen awoodihii ay markii hore ahaayeen.
Waagii hore waagii hore taariikhdayadii hore, kuwaas oo akhrin kara qoraallada iyo calaamadda.
Hase yeeshee waa ka fiicnaanshaha taariikhda ama khuraafaadka, jidhka bini-aadanka wuxuu ilaaliyaa dhacdooyinka waqtiga oo dhan.
Jirka bini'aadamka ee horumarkiisa ayaa muujinaya oo muujinaya diiwaanadii hore.
Laga soo bilaabo aasaaskii aadanaha illaa imika, taariikhdeeda waxaa lagu qeexay horumarinta nafta qofka. Iyo in ka badan, wax sii sheegidda mustaqbalkooda waxaa ku jira horumarka laga soo dhaafay.
Horumarinta Embryological waxay muujineysaa in marxaladda ugu horraysa ee uur-jiifku yahay galmo la'aan; ka dib, inkastoo lab ama dhedig aan si buuxda u muuqan, in xaqiiqda ay tahay labadaba; wakhti dambe, in laga yaabo in la sheego inuu yahay haween. Waxay noqonaysaa ragga kaliya ee ugu dambeyntii horumarinta. Xaalad walbana waxay muujineysaa xaqiiqadan muhiimka ah: ka dib marka uu dhamaysto horumarka jinsiga labadaba weli waxaa jirkiisa ka jiraa xubin ka mid ah xubnihii qaaska ahaa ee jinsiga ka soo horjeeda. Waxaa suurtagal ah in horumarinta laga bilaabo aadanaha laba-jinsi ah ee haweenka ah marka hore haweenku muujiyeen.
Jirka bini'aadamku waa matxafka iyo naqshadeynta afar heer oo kala duwan oo horumar ah, marxalad kastoo daboolaya waqti aad u weyn. Dhinaca jidhka ee marxaladani hadda waxaa na matalaya macdanta, khudradda, xayawaanka, iyo dunida aadanaha. In macdanta, foomka ugu horreeya wuxuu bilaabmaa inuu muujiyo kaydka ugu horeeya, laakiin ka dib, isagoo ka shaqeynaya naftiisa, iyo iyada oo loo marayo farsamaynta awooda magnetka, oo loo yaqaano sayniska "asxaabta kiimikada ah, qaabka muraayadda ugu fiican ayaa la horumariyaa. Iyadoo wejiyada koowaad ee foomka macdanta, noloshu waxay bilaabmaysaa inay muujiso marxaladda labaad waxayna calaamad u tahay calaamadaha ugu horreeya ee nolosha geedka, laakiin ka dib, iyada oo la adeegsanayo awoodda magnetka iyo koritaanka iyo ballaarinta gudaha geedka, nolosha -cell waa la horumariyaa lagana dhigaa. Nidaamkan waxaa loo yaqaan biology iyo cilmi-nafsi ahaaneed habka "gaduudan." Intii lagu guda jiray koritaanka nolosha dhirta, rabitaanku waxa uu marka hore soo bandhigay horumarinta laba-laab midnimada noolaha, kaas oo marka danbe, ballaarinta nolosha iyo soo jiidashada rabitaanka, xayawaanka-unugyada ayaa la kobciyaa loona qaybiyaa laba unugyo isku dheelitiran, labaduba waxay leeyihiin sifooyin isku mid ah. Marxaladan saddexaad waxaa lagu magacaabaa "unug-kala-qaadis." Horumarka dambe ee marxaladdan saddexaad, xayawaanka-unuggu wuxuu muujiyaa galmada, wuxuuna u baahan yahay ururada laba unug ee jinsiga ka soo horjeeda si loo faafiyo, maadaama ayan sii wadi karin noocyada "qaybinta "Kaliya. Iyadoo horumarinta jinsiga ee xayawaanka, marxaladda afaraad ee bani'aadamku wuxuu bilaabmaa marka jeermiska maskaxda ee la arko iyadoo lagu muujinayo muuqaalka xayawaanka-unugyada, waxaana loo qaadaa qaabka aadanaha, kaas oo sii kordhay by maskaxda maskaxda.
Afartan heer ee horumarineed waxay qeexayaan koritaanka jirka ee aan hadda heysano. Meydadka muddadii ugu horreysay waxay ahaayeen muuqaal muuqaal ah oo ah qaabka kristin oo ay wax yar ka soo baxeen iftiinka qorraxda. Gudaha hareeraha ayaa ahaa niyada mustaqbalka. Qodobada tartankan ayaa ku filan naftooda. Ma ay dhiman, mana jiri doonaan ilaa inta ay dunidu dhamaato, waayo waxay matalayaan foomamka ugu wanaagsan marka la eego dhamaan foomamka oo la dhisi doono. Bilowga xilliga labaad waxaa lagu calaamadiyey muraayadda sida cirifka u eg oo ah xilliga ugu horeeya ee ka soo baxaya qaabka loo yaqaan oval or egg-like; gudaha qaabka ukumaha oo kale ayaa ku jira jeermiska nololeed ee loo yaqaan hawlaha by neefta ee cirifka kareemka, iyo foomka ukunta-sida, si toos ah, kiciyay arrin sahlan si ay u muujiyaan. Qeybtan labaad ee beelaha waxay isku dayeen qaabab la mid ah qaabkoodu u eg yahay qaabkooda, laakiin waxay ku dhex jiraan qaabka ukumaha oo kale, oo ah qaab wareegsan, oo muuqaal ah sida goobo wareegsan si loo eego qiyaastii toosan. Mid kastoo isku mid ah ayaa isku darsaday oo la waayay qaabka uu soo saaray. Muddadii saddexaad waxay bilaabmeen foomamka ukunta-la midka ah ee tartanka wareegga labaad. Nooca ukumaha ee la midka ah ayaa lagu soo rogay qadar dhaadheer oo labadii jinsi, lab iyo dhedig, oo ah nin iyo naag ku jira hal jidh * Danta ayaa ku kacday tartankan laba-jinsi oo jilicsan, qaarna waxay bilaabeen inay kiciyaan awoodda ay ku dhalatay . Laga soo bilaabo nolosha iyo qaabka awoodaha gudaheeda, tan lagu naqulayo, iyo waxa ka mid ah qaabka bini'aadamka ee hadda waa xumbalus, qaab muuqaal ah oo soo baxaya kaas oo si tartiib ah u kordhay oo loo adkeeyay qaab la mid ah midkii laga soo saaray. Markii ugu horeysay waxaa la sameeyay kaliya dhowr, laakiin ugu dambeyntii tartanka ayaa raacay tusaale ahaan. Qeybaha koonfureed ee la midka ah ayaa ku dheggan qaar ka mid ah kuwii hore u soo saaray. Tani waa jinsiyad aan caqli-gal ahayn oo ku sii jiraya baraha dadka. Kuwii kalena way dhinteen, laakiin waxay u muuqdeen inay uuraysteen. † Baadhisyadaas ayaa soo noqnoqday waxayna noqdeen kuwo isku dhafan, oo waqti hore bilaabay inay yeeshaan mid ka mid ah jinsiyadaha ka badan kuwa kale, illaa kama dambeysta aanay awood u lahayn inay dhaliyaan, kali ahaanteed, sida xubnihii jinsiga ah ee aan la jaanqaadi karin ayaa ka yaraa oo aan la sheegin. Kadibna mid waliba wuxuu la mid yahay jinsiga kale wuxuuna soo saaray jinsiga raga iyo haweenka sida aan hadda u garanayno.
Muddadii ugu horeysay ee horumarinta jinsiga ah ee isweydaarsiga caan ka ah ayaa dhiirrigeliyay koritaanka kuwa ay soo bandhigeen, laakiin waxay ka soo wada jeedeen wax kasta oo raacay illaa iyo labadii jinsi oo ay bilaabeen inay abuuraan ayna ku kobciyaan galmo. Dabadeed xayawaanka caynkaas oo kale ah ayaa lagu daboolaa oo la neefsadaa iyada oo loo marayo jirooyinka ay soo saareen urur shaqaale. Tan iyo markii da'da ay dhaaftay, laakiin xuubka macdanta ayaa sii waday xiriirka aadanaha iyada oo maanka lagu hayo. Laga soo bilaabo iyaga maskaxaha maskaxda, iyo maskaxda jirka ayaa qaadata oo dib u ceshatay qaabkeeda bani-aadmiga. Iyada oo la xiriirta maskaxda oo ay la socoto qulqulaha oo kale sida bini-aadanka ayaa loogu talagalay inay noqdaan kuwo caqli gal ah, sidii ay ahaayeen labadii hore.
Dhamaan arrimahan waxaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo cajaa'ib leh kuwa marka hore maqla, laakiin aan la caawin karin. Waxay u muuqan doontaa mid cajiib ah haddii ay ka fekeraan oo ay wax ka bartaan iftiinka maskaxda iyo koritaanka jirka. Sida daraasadda iyo fekerka ayaa sii socota qorshaha ayaa la fahmi doonaa.
Sayniska jinsiga waa inuu ogaado sida loo soo saaro jirka ugu fiican. Falsafada jinsiga waa in la ogaado ujeedada jidhka iyo in ay si fiican u isticmaalaan. Diinta jinsiga waa in ay hoggaamiso ikhtiyaarka inay si caqligal ah u noqdaan midnimo.
Maxay tahay macaamilka adduunka, jinsigu wuxuu u yahay adduunka muuqata. Jinsi waa tan ugu caansan, qaabaysan, muujinta fekerka. Dhammaan dabeecadda waa
Dumarku waa inay noqdaan qolfaha ama qalabka loo adeegsado maskaxda si ay u barbareeyaan isku-simanaanta iyo isku-dheelitirnaanta adduunkani, iyo iyada oo loo marayo jaanisyada noolasha nolosha. Hase yeeshee, maskaxeed maskaxeed, jidhka galmoodka, jinsiga ayaa loo beddelay dagaalyahan kaas oo leh oo uu xanaaqsan yahay oo maskaxda ku hayo. Ciddii falaagsanayd waxay ku faantaa qorraxda, oo nin waluba wuxuu u socdaa sidii ay ahayd xigmad u eg birta. Jinsi waa la addoonsan yahay oo hadda waxay ku qasban tahay maskaxda in ay wax ka qabato baahida loo qabo sababaha, sidaas darteed dhammaystirani waa awooda in jinsi bani-aadmigu yahay ciidan aad u tiro badan ayaa loo diiwaangaliyay inay ka dagaalamaan sabab, iyo sharciyada xilliga iyo xilliga, taas oo jinsiga waa in la xukumaa. Diidmada sharciyadan, quruumaha iyo jinsiyadu waxay ka hooseeyaan heerka xayawaanka waxayna ku gudubtay hoos u dhaca biyaha.
Jinsigu waa wax qarsoodi ah oo ah dhammaan kuwa dunidan ku soo galaya inay xalliyaan. Kuwa weli ka hooseysa addoonnimadooda, jinsi waa in ay waligood qarsoodi ahaadaan. Si aad u xalliso qarsoodiga jinsiga waa inaad ka madax banaanaato canshuurteeda, iyo inaad awooddo inaad ku hagto socodka nololeed ee noloshooda si aad u sareeya.
Maqaalada qadiimka ah waxaa lagu sheegay in neophyte loo bilaabay macnaha afarta erayadan: Bilow, Dare, Will, Silence. Dadku way illoobeen ama waxay lumiyeen jidka loo gooyay. Laakiin jumlada iyo calaamaduhu waxay marwalba marqaati u yihiin xaqiiqda ah in macbadka Mysteries yahay jidhka nin.
Ninka ama naagtu waa kala badh qof, guurkuna waa kan ugu da'da weyn ee aadanaha. Galmadu waxay ku lug leedahay hawlaha qaarkood. Mas'uuliyadda ugu horreysa ee ugu muhiimsan ee aadanaha waa guurka; ma aha guurka loogu talagalay kaliya dareenka, laakiin waa urur midaysan oo ay bani-adayguna sii socon doonaan oo ay kaamilayaan tartanka. Waajibaadka adduunku waa in laba qof oo jinsi ah oo ka soo horjeeda ay isku daraan mid ka mid ah in ay soo saaraan nooc kaamil ah, nooca noocan oo kale ku jiri lahaa labada aabbe iyo hooyo dhexdooda. Waajibkeedu wuxuu noqon karaa in mid waliba uu yahay mid isku dheellitiran dhinaca kale ee tijaabooyinka iyo dareenka nolosha, maadaama dabeecada dalab kasta oo kale ay u baahan yihiin casharrada ugu baahida badan si loo xalliyo, loo xoojiyo, loona cadeeyo dabeecada kale , mid waliba, sida kan kale, dhinaca ka soo horjeeda ama dhinaca kale ee dabeecaddiisa. Dhamaan arrimahan waxay khuseeyaan casharrada ay bani'aadamku ka baranayaan guriga iskuulka lagu magacaabo aduunka, waxaana loogu talagalay kuwa ku noolaan lahaa nolol farxad leh dunida.
Dhibaatada jinsiga waxaa ku jira qarsoodi qoto dheer. Waxaa jira khatar ah in la hormariyo, iyada oo laga yaabo inay suurtogal tahay in ay si qalad ah u fahmeen oo ay si xun u fahmeen mid ka mid ah wejiyada maskaxda laba-jibaaran. Qarsoodigan wuxuu noqon doonaa habka lagu gaari karo himilada mujtamaca ee guurka kaas oo ahaa mawduuca qoraallada dhabta ah ee alchemical, calaamadaha Rosicrucians, iyo falanqeeyayaasha marwalba. Waa, run ahaantii, in bani-aadmigu uu ku jiro nin iyo naagba, in ninka gudahiisa uu jiro haweeney suuragal ah, iyo in gabadhu ay jirto nin awood leh. Jinsiyadda ugu horreysa, oo ah nooca jinsiyaddeena ay tahay natiijada, ayaa weli ah mid u taagan qof kasta oo ka mid ah maskaxda Ilaah. Noocyada nooca bini-aadamnimada ah ee lab iyo dheddig ahaan waa in mar labaad la horumariyo kahor intaan godka ilaahiga ah, galka barafka, si buuxda u jilcan. Horumarintan waxaa la samayn karaa oo kaliya si macquul ah oo macquul ah, ka dib markii aan ka barannay casharrada ay hay'adeenu wax baraan. Sababta soo jiidashada jinsi kasta midka kale waxay u egtahay rabitaanka muujinta iyo koritaanka awoodda ka soo horjeeda ee laftiisa, iyo sababta oo ah jinsiga kale waa muuqaalka dibedda iyo ka soo horjeeda dhinaca kale ee la xannibay. Guurka dhabta ahi wuxuu dhacaa marka labadaba siman yihiin isla markaan mid isku mid ah ku midoobaan. Tan waxaa la sameyn karaa oo keliya kadib khibrado dheer oo nolol badan iyo ka dib markii la helay. Waxaa laga bartaa dhamaanba noloshooda jirkooda wax u baran karaan, iyo ninba ugu dambeyntii waa la ogaa, in ay jirto wax nolosheeda oo aan ku qancin karin. Taasina waxay keentaa dhinaca kale ee dabeecadda qofka oo ku dadaaleysa inuu naftiisa u muujiyo isagoo ku qanacsanayn nolosha nacasnimada, dareenka hoose ee midnimada ee ilaahnimadiisa, isagoo doonaya inuu nolosha ka baxo, haddii uu u baahan yahay, qofkastaa wanaagiisa ama wanaagiisa kuwa kale, iyagoo si joogta ah u jihaysan xagga ruuxiga ah, iyo soo jiidashada jacaylka dhabta ah ee laga saaro shay kasta oo jilicsan. Dhinaca gudaha ee qofka iskiis uma muuqan doono mid ka mid ah qaababka quruxda badan leh ee laga yaabo inay la yimaadaan ballanqaadyo iyo cilado. Taasina waa dareenka waana in la eryaa iyada oo aan lahayn ciqaab. Dareenka jinsiga kale waxaa loo wareejiyaa gudaha dhexdiisa, kuwaas oo ka jawaabaaya sida aadaabta loo xaqiijiyay. Iyada oo yaraynta ixtiraamka waxa la siiyaa fikrado iyo shaqeyn, sidaas qudheedu maaha mid kale oo ka jawaabta (marnaba la'aanteed) jidhkaas jir ahaaneed. Marka arrintan la dhammeeyo dhibaatada galmada waa la soo saarey. Ninkaas waxaa loo baahan yahay inuu mar kale u galo jirka jinsiga sababtoo ah hadda awoodaha taranka ee hadda loo kala qaybiyay waa la isku darayaa mid ka mid ah oo awood u yeelan kara oo abuuri kara jirro, haddii ay "rabto", sida ay sameeyeen tartanka ee muddada saddexaad, taas oo ahayd prototype.
Ka mid ah isbeddelada jireed ee horay u guursaday guurka dhabta ah, ayaa ah in la tooso nolosha qaar ka mid ah xubno jidhka ah (sida qanjirrada dhabarka) ee hadda nolosha nafta-qolalka maskaxda.
U ogolow maskaxda iyo wadnaha in ay helaan helitaanka maqnaanshaha joogtada ah ee aan dhammays tirnayn, oo aan aheyn gool kale, dhammaadka. Si loo gaaro xaaladeena xaadirka ah ee waayeelka horumarka ah ayaa muhiim u ah dhismaha hay'adaha kale. Dhalinyaradu weli waa lagama maarmaan u ah dhismaha ururo kale kuwaas oo si fiican uga tarjumaya loona soocelin lahaa miyirka. Waqtigu wuu gaaban yahay, habkuna waa iftiimaa haddii uu miyir qabo, ma ahan jirka, ee aan raadsanno. Ka dibna waxaanu siinaa jidh kasta iyo wax kasta oo qiimaha buuxa u ah ujeedada ay tahay inuu u adeego. Wixii kasta oo jirka ah waxaa lagu qiimeeyaa si loo eego faa'iidadiisa si loo gaaro miyir-qabka, ma aha mid ku salaysan jirkiisa ama foomkiisa. Haddii aynu miyir-qabno miyir-beelka oo dhan, jidhkeenu si dhakhso ah ayuu u beddeli doonaa oo u iftiimayaa iftiin.
Tani waa qayb ka mid ah jinsi ku cayaaraan natiijada ugu dambeysa ee Miyir-qabka.
* Jiritaankani waxa uu ku andacooday in Kitaabka Quduuska ah ee Aadan-Xaawo, ka hor inta aanay cunin tufaaxa aqoonta oo uu dhalay caruur.
† Tani waa asalka sheekada of the phoenix, shimbir shimbir ah oo leh dadyowga qadiimiga ah. Waxaa la sheegay in phoenix ay u muuqatay marxalad kasta oo soo noqnoqonaysa, oo waxay ku gubi lahayd meesha allabariga, laakiin marar badan ayay ka soo baxaysaa dambaska dhalinyarada iyo quruxda badan. Sidaasi oo kale ayaa lagu muujiyay dhimashadeeda dhimashada - iyada oo loo marayo reincarnation. waxay ku xidhan tahay sharciga jinsiga, iyo unugyada jirkeena ayaa ka shaqeynaya arrintan.